» बहस : हेटौंडा कस्तो बनाउने ?
बहस : हेटौंडा कस्तो बनाउने ?
२०७५ भाद्र ३,आईतवार १२:३५
हेटौँडा, ०३ भदौ । हेटौंडा कस्तो बनाउने बहस सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । अब पनि हेटौंडालाई सुन्दर बनाउने ‘भिजन कृयशन’ गर्न सकिएन भने ‘सुन्दर हेटौंडा’ कुरुप हेटौंडा बन्न बेर लाग्दैन । हेटौंडाको विकासको मोडलबारे सरोकारवाला निकायले सर्वपक्षीय छलफल गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व उपमहानगरपालिकाले लिँदा राम्रो हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा नागरिक अभिमत बुझेर काम गर्न जनप्रतिनिधि चुके भने यसले सबै कुरा भाताभुङ पार्न सक्छ । ए संघीता भनेको यस्तै लथालिङ त रहेछ नि भन्ने भान नागरिक स्तरमा पर्यो भने त्यसले देशलाई नै हानी पुर्याउँछ ।
नागरिक के चाहन्छन्, यो भावना जनप्रतिनिधिले बुझ्न पर्छ । नागरिकलाई ठूला सपना बाड्नु भन्दा भए रहेकै स्रोतको समुचित प्रयोग गरेर सरकार भएको महसुस गराउन स्थानीय सरकारले सक्नुपर्दछ । जनतालाई ठूला कुरा केही चाहिँदैन, साना कुरामा सरकारले ध्यान दिए पुग्छ । दैनिक जीवन यापनमा आइपर्ने झंझटलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएर नागरिकको जीवनलाई सरल बनाइदिने हो भने ठूलो तारा झारी दिनु पर्दैन ।
अहिले हेटौंडामा नो पार्किङको इस्यु चर्चामा छ । भएका सबै सडकको दुबैतिर नो पार्किङको बोर्ड झुण्डाइदिएर नगरपालिकाले नागरिकलाई अर्को तनावमा पारेको छ । सडक मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाएर बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मूल विषयलाई इग्नोर गरेर उपमहानगरपालिका अघि बढिरहेको छ । यो फराकिलो सडक र व्यवस्थित शहरको कन्सेप्ट विपरित छ ।
अर्कोतिर, व्यवसायी पनि मर्कामा छन् । यो टिप्पणीकार भद्रगोल पार्किङको पक्षमा छैन । तर, व्यवस्थित पार्किङ बनाउने नाममा ऋणपन गरेर व्यवसाय धानेकाहरुको विरुद्ध राज्य आतंक बन्द गरिनुपर्छ । बजारमा सजिलै पुग्न सकिने व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने अर्कोतिर शहरलाई व्यवस्थित बनाउन पार्किङ व्यवस्थापन पनि उसकै दायित्व भित्र पर्छ । कर उठाउने मात्र स्थानीय सरकारको अधिकार होइन, कर लिइसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गरेर नागरिककै सुविधाका निम्ति खर्च गरिनुपर्छ । अहिले हेटौंडाका सडक पेटीहरु भत्किँदै बन्दैछन् । यि पेटीहरु बनेको केही वर्षमात्र भएको छ । केही वर्षभित्र फेरि भत्काइएको छ । यसो गरिनु भनेको जनताको करको दुरुपयोग हो । कुन सडक कस्तो प्रकृतिको हो छुट्याएर सोही अनुसार नीति तय गरिनुपर्छ । अनिमात्र त्यसमा खर्च गरिनुपर्छ । लहडमा खर्च गरेर सत्यानास बनाउन पाइँदैन । त्यसैले हेटौंडा शहर कस्तो बनाउने, बहस चलाउनै पर्छ ।
मेडिकल, अस्पताल, विद्यालय, पसल, शौचालय कहाँ बनाउने हो ? सडकमा कहाँ फुल रोप्ने हो ? कहाँ नेरको रुख काट्ने हो ? कहाँ ढल बनाउने ? कहाँ के गर्ने यस बारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । दीर्घकालिन नीति पनि चाहिन्छ । जहाँ पायो त्यहाँ जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर स्थानीय सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउँदैन । नीति बनाउने, त्यसलाई सरोकारवाला वा आम नागरिकको बीचमा पुर्याउने र छलफलपछि मात्र निर्णय गर्ने शैली जान्नुपर्दछ । हावा तालमा लैबरी नाचेर मात्र कहाँ सुन्दर र समृद्ध सहर बन्छ ?